အလွမ်းပြေအမှာ | မ၀င်းမေ(နေမျိုး)
၂၀၀၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ရက်နေ့ ဆိုလျှင် ကျွန်တော့်ဇနီးကွယ်လွန်သည်မှာ ၈နှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဇနီးဖြစ်သူကွယ်လွန်ခြင်း ၈နှစ်ပြည့်အဖြစ် ကျွန်တော်တို့သားအဖတွေ ဘုံဆွမ်းလောင်းလှူရန် နံနက်စောစောပြင်ဆင်ကြသည်။ ဒီနေ့မှာ ကျွန်တော် က နံနက်လေးနာရီခွဲခန့်တွင် နိုးလာသည်။ အိပ်ချင်စိတ်မပြယ်သေးပေမယ့် မျက်နှာသစ် ဆွမ်းအိုးတည်လိုက်သည်။ ခနနေ တော့ အမေနိုးလာသည်။ အမေက ရေတော်ကပ် ဘုရားဝတ်ပြုနေတော့ သားနှစ်ယောက်ကိုနှိုးရသည်။ သားနှစ်ယောက် နိုးလာတော့ မနေ့ကလုံးထားသော ၀က်သားအိုးကို အာလူးနှင့်ရောတည်ခိုင်းလိုက်သည်။ အမေဘုရားဝတ်ပြုပြီးတော့ အိမ် အောက်ထပ်ဆင်းလာကာ ချက်ခန်းပြုတ်ခန်းဝင်ရောက်စီမံသည်။ ညီဖြစ်သူ ဇော်မိုးကျော်လည်းရောက်နေသည်မို့ သူကပါ ၀င်ရောက်ချက်ပြုတ်ပေးသည်။ အရုဏ်ကျင်းလို့ အလင်းရောင်လာတော့ ဆွမ်းအိုးလည်းနပ်ပြီ။ ၀က်သားနှင့် အာလူးဟင်း လည်းကျက်ပြီ။ သရက်ချဉ်လည်း သုပ်ပြီးပြီ။ ဘုံဆွမ်းလောင်းဖို့ အိမ်ရှေ့မှာ ခြေတံရှည်စားပွဲခင်းကာ ဆွမ်းဇလုံ၊ ဆွမ်းဟင်းဇလုံတွေတင်ထားလိုက်သည်။ သမီးကလေးက ခုချိန်ထိမနိုးသေး။ ညက သူ့ Guide ဆရာနှင့် မိုးချုပ်ချုပ်ထိ စာလုပ်ခဲ့ရသည်မို့ အိပ်ပါစေဟု မနှိုးဘဲထားလိုက်တော့သည်။
နံနက်လင်းအရုဏ်နှင့်အတူ သံဃာတော်များကြွလာတော့ ကျွန်တော်တို့ သားအဖတစ်တွေ ဘုံဆွမ်းလောင်းလှူကြသည်။ ဤပြုသောကောင်းမှုအဖို့သည် ကျွန်တော့်ဇနီး အစ်မ မ၀င်းမေကိုရည်စူး၍ ပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆွမ်းလောင်းလှူနေစဉ် ကြွလာတော်မူကြသော ကိုရင်များ၊ ဦးဇင်းများ၊ ဘုန်းကြီး များကို ကြည်ညိုစိတ်ဖြင့် ဤသို့လောင်းလှူလိုသောစိတ်၊ ဤမျှမက လောင်းလှူလိုသောစိတ်တို့ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာရသည်။ ဆွမ်းနှင့်ဆွမ်းဟင်းများကုန်သွားတော့ ဘုံဆွမ်းလောင်းလှူခြင်းကို သိမ်းလိုက်သည်။ ကိုရင်များ၊ ဦးဇင်းများကတော့ သွားလာကြွချီနေကြဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ဘုံဆွမ်းလောင်းလှူပြီးတော့ ဇနီးကိုအမျှဝေသည်။ ပူပူနွေးနွေး ဆုံးပါးကာစကလို ၀မ်းနည်းပူဆွေးမှုများ ယခုအချိန်မှာမရှိတော့။ လျော့ပါးကင်းစင်ချိန်ရောက်ပြီဟု ဆိုနိုင်ပြီဖြစ်သော်လည်း ငြိမ်သက်သော သတိရစိတ်သည် ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။
ယခုစာအုပ်လေးသည် ကျွန်တော့်ဇနီးကိုသတိရစိတ်ဖြင့် ရေးဖြစ်ခဲ့သော ကဗျာ၊ ၀တ္ထု၊ ရသစာတမ်းများကို စုစည်း ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်အဖို့အလွမ်းပြေရသလို စာရှုသူတို့လည်း လွမ်းတတ်ပါက အလွမ်းပြေစေနိုင်မည်ဟု ထင်မိပါသည်။
This entry was posted on April 16, 2011, 3:13 pm and is filed under အလွမ်းပြေအမှာ. You can follow any responses to this entry through RSS 2.0. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
#1 byူလွင် on June 5, 2011 - 4:23 am
ဒီအမှာစာကလေးဖတ်နေရင်းတောင်လွမ်းနေရပြီ ဒီစာအုပ်ကလေးဖတ်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ မောင်လေးတယောက်က ဖဘမှာ ညွန်းကထဲကဖတ်ချင်နေခဲ့တာပါ။
တုမေစိတ္တံစကာယောစ သဗ္ဗဒေ၀ မနုဿာစ သိတံဥဒကေဣစိတံ ပတ္တံဟေတုမေ မေတ္တံ..... ဗုဒ္ဓစက္ခုံ ကိုယ်လုံးခြုံ၍ လုံစေသော်... ဓမ္မစက္ခုံ ကိုယ်လုံးခြုံ၍ လုံစေသော်... သံဃာ့စက္ခုံ ကိုယ်လုံးခြုံ၍ လုံစေသော်...
ဆရာနေမျိုးသည် မန္တလေးမြို့တွင် နေထိုင်ပါသည်။
နာကျင်တဲ့ ဒဿနတွေ မရချင်တော့ဘူး
အစ်မ မ၀င်းမေသို့ …..
နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ မတွေ့ဆုံမီ
စာမူခွင့်ပြုချက် - 6200520810
မျက်နှာဖုံးခွင့်ပြုချက် - 6200701010
ပထမအကြိမ်၊ 2011 ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ
မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်း - ဘဌေးကြည်
စာစီ၊ စာမျက်နှာဖွဲ့ - စီအဲန်တီ
ထုတ်ဝေသူ - ဦးတေဇဇော်
ပုံနှိပ်သူ - ဦးထင်အောင်ကျော်
¾၊ 47 လမ်း၊ ရန်ကုန်။
အုပ်ရေ- ၅၀၀၊ တန်ဖိုး - ၁၀၀၀ ကျပ်။
စာဖတ်သူတို့ရဲ့ အသံ- ဒီကိုနှိပ်ပါ
(10.10.2011) မှ စတင်ရေတွက်ပါသည်။
(လှည်းတန်းခံစားမှုအက်ဆေးများအား နယ်ပယ်အသီးသီးမှ စာရေးသူများက ရေးဖွဲ့တင်ဆက်ထားပါသည်)
တန်ဖိုး- 1800 ကျပ်
Ph: 01-243542, 721578